Uphila saka umsakazi obekuthiwa useshonile
UMSAKAZI weZwi Lomzansi FM, uMfanafuthi “FK” Khumalo okubikwa ukuthi uyelulama esibhedlela emva kokuthi kusabalale ukuthi ushonile Isithombe: IZWI LOMZANSI FM
BONGIWE ZUMA | January 6, 2020
UYAVEVA umndeni womsakazi obusukhanyise nekhandlela uzilela ukushona komsakazi wodumo kwiZwi Lomzansi FM, uMfanafuthi “FK” Khumalo, isibhedlela esithe useshonile kanti udla anhlamvana.
Umndeni walo msakazi uthole ucingo oluphuthumayo ngoLwesine ekuseni, luvela eSt Mary’s Hospital, eMariannhill ngasePinetown kuthiwa useshonile.
Udadewabo kaFK, uNksz Thulisile Khumalo uthe ngesikhathi eshayelwa ucingo, baqale ngokuqinisekisa amagama kamfowabo nawakhe, maqede bamyalela ukuthi aphathe omazisi ukuze kuzoqedelwa ukugcwalisa amafomu okushona kwakhe.
“Ngivele ngasangana ikhanda, ngakhala kwafika nomakhelwane, sashayela izihlobo. Sifike ifomu likadokotela lokushona kwakhe seligcwalisiwe, sekushoda umazisi.
Ngenhlanhla ngafikelwa wukuya ewadini ebelele kuyo. Ngithe ngingena ngaqhamukela kuyena,” kusho uNksz Khumalo.
Eqhuba, uthe uphuthume kuMnuz Vela Xulu ongumphathi weZwi Lomzansi FM, wambikela nabantu ebebehamba nabo.
“Baqale bangakholwa nabo, baze bakholwa ngoba sebembona beqhamukela kuyena. Kangiyazi le nto esehlele futhi kangikaze ngizwe ukuthi isibhedlela siyakwazi ukwenza into efana nalena. Uma bechaza bathi kube yiphutha bebeshayela omunye umndeni ucingo. Okungimangazayo wukuthi bakhulume nami baqinisekisa amagama ethu sobabili,” kusho uNksz Khumalo.
Uma echaza ngokwesibhedlela besiqonde ukushayela omunye umndeni wakwaMhlongo, okungawenzi umqondo ngoba imininingwane yesidumbu sakhona yehluke kakhulu kwekaKhumalo.
UXulu uthe kubashaqisile ukuthola lezi zindaba ngoba bese kukhona abazisabalalise nasezinkundleni zokuxhumana.
Okhulumela uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal, uNkk Noluthando Nkosi, uthe: “Umnyango ufisa ukuphinda uxolise ngokuphambana kwezinkomishi esibhedlela, okuholele ekutheni umndeni wesiguli esiphilayo uthole umyalezo ‘ngokudlula kwaso emhlabeni’ okungesilo iqiniso.
Ngaphandle kokuzibophezela, umnyango uyakuqonda ukukhahlamezeka ngokomqondo okungadalwa yilokhu. Abaphathi besibhedlela babe nomhlangano nezihlobo zesiguli esithintekayo kuhlanganisa naso, baxolisa ngaleli phutha.
Kubukeke sengathi isixoliso samukelwe.
Abaphathi besibhedlela baphinde badonsa bonke abasebenzi ngendlebe ngokubaluleka kokuqikelela ukuthi iphutha elinje kaliphindi lenzeke.”